प्राध्यापक रामकुमार पाँडेसँग तिन प्रश्न | Ketaketi Online
Home » प्राध्यापक रामकुमार पाँडेसँग तिन प्रश्न
प्राध्यापक रामकुमार पाँडेसँग तिन प्रश्न
posted by ketaketionline on Sun, 07/05/2015 - 21:00
प्राध्यापक रामकुमार पाँडे इन्टरनेसनल पेन नेपालका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । उहाँका प्रकाशित कृतिहरु नेपाल परिचय, नेपाल कीर्तिमान, विश्व परिचय, नेपाल निर्माणका गौरव गाथा, वैभवशाली बहुमूल्य हुन् । यस बाहेक उहाँका अन्य अनुसन्धानमूलक कृतिहरु पनि प्रकाशित भएका छन् । उहाँसँग केटाकेटी अनलाइनको तिन प्रश्नका लागि गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ ।
‘हाइकु’ को विकासका लागि काम गर्दै छु । म आफैले लेखेका हाइकुहरुको किताब पनि तयार गर्दै छु । ६ वटा ऋतुहरुमै हाइकुको सङ्ग्रह निकाल्ने तयारी हुँदै छ । त्यस्तै बालसाहित्यका कृतिहरु पनि प्रकाशनको तयारी गर्दै छु । ‘घुघुति’ बालकविता सङ्ग्रह र एउटा बालकथा सङ्ग्रह तयार गरेको छु ।
२. तपाईंको विचारमा बालसाहित्य कस्तो हुनुपर्छ ?
बालसाहित्यले नैतिक शिक्षा दिने होइन, यसले बालबालिकालाई रमाइलो गराउँदै मनोवैज्ञानिक रुपले उनीहरुको चरित्र निर्माणमा सहयोगी पुर्याउन सक्नु पर्छ । त्यसैले शिक्षा र मनोरञ्जन सहितको बालसाहित्य उत्कृष्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
३. तपाईं अध्यक्ष रहनु भएको इन्टरनेसनल पेन नेपाल कस्तो संस्था हो ? यसले अहिले के काम गर्दै छ ?
यो विश्वभरमा रहेका १ सय ४ वटा देशमा १ सय ५० भन्दा बढी शाखा भएको संस्था हो । यो संस्थाको स्थापना ८० वर्ष अगाडि भएको हो । नेपालमा यसको शाखा स्थापना भएको २५ वर्ष पुग्यो । सन् २००८ देखि यो संस्थाको अध्यक्षमा चुनिएर मैले काम गर्दै आएको छु । यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो ।
अहिले यो संस्थाले किशोर साहित्यको विकासका लागि केही काम गरिरहेको छ । किशोरका लागि उपयोगी ५ वटा कथा सङ्ग्रह प्रकाशन गरेको छ । अहिले समाजका लागि उर्जावान् वर्ग कक्षा ८, ९ र १० का विद्यार्थीका लागि साहित्यको अभाव छ । त्यो अभाव पूरा गर्न पेन इन्टरनेसनलले अन्य संस्थाहरुसँग मिलेर काम गर्ने योजना बनाएको छ ।